Qaramada Midoobay oo sheegtay koonfurta Soomaaliya inay tahay meel si aad ah loogu ugaarsado shaqaalaheeda gargaarka. | puntlandi.com
Monday, August 20th, 2018 | Posted by P2
Qaramada Midoobay oo sheegtay koonfurta Soomaaliya inay tahay meel si aad ah loogu ugaarsado shaqaalaheeda gargaarka.
Beesha caalamka ayaa walaac xoogan ka muujisay beegsiga lagu hayo shaqaalahooda gargaarka ee ka howgalla koonfurta iyo Soomaaliya, sida lagu sheegay warbixin sannadle ah oo kasoo baxday xafiiska isku dabaridka gargaarka ee Qaramada midoobay.
Warbixintaan ayaa lagu sheegay in kooxaha hubaysan ay beegsanayaaan shaqaalaha ka shaqeynaya gargaarka iyo howlwadeenada caaafimaadka , sababtuna ay tahay in samafalayaasha caaalamiga ah ay ka niyad jabaan kasii shaqeynta howlaha gargaarka koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya oo noqotay goob lagu ugaarso shaqaalaha safamalka ee caalamiga ah.
” Weli waxay wajahayaan cabsi waxaana marar badan laga hor istaagay inay caawiyaan kuwa baahan. waa in la joojiyaa, ” ayaa lagu yidhi warbixinta.
Qaramada Midoobay ayaa diiwaan galisay 74 shaqaaqo ah oo saameeyay, shaqaalaha gargaarka iyo xarumaha caafimaadka, tan iyo bilowgii sannadkaan. Todobo kamid ahaa shaqaalaha gargaarka ayaa lagu dilay Soomaaliya kuwa kale waa lagu dhaawacay.
Sidoo kale, 18 shaqaale samafal ah ayaa lagu afduubtay koonfurta Soomaaliya, waxaana kamid ah kalkaaliso sare oo lagu magacaabo Sonja Nientiet , taasoo u shaqeynaysay hay’adda laanqayrta cas, waxaana laga afduubtay magaalada Xamar, bishii May ee sanadkaan.